Ninkeyga faa'iido malahan... ma ogola shaqada guriga
Home Hoyga Nolosha Ninkeyga faa’iido malahan… ma ogola shaqada guriga
Ninkeyga faa’iido malahan… ma ogola shaqada guriga
Sheekadan waxay ku saabsantahay nolosha guriga qoys da’yar ah. Hooyada guriga ayaa ka cabanaysa in ninka ay is qabaan uu yahay nin caajis badan, kuna liito qabashada howsha guriga.
Waxay kaloo sheekadan tilmaamaysaa dhaqamada cusub iyo qoysaska waayahan casriga ah.
Inta aad sheekadan akhrineyso waxaa laga yaabaa in aad xasuusato asxaab ama qaraabo u nool sida qoyskan, maadaama ragga Soomaalida lagu sheego in howsha guryaha ay ku liitaan.
Marka aad akhriskeeda dhmeysato, fadlan nala wadaag aragtidaada ku aadan sheekadan. Maxayse kula tahay in ragga Soomaalida ahi ka bartaan sheekadan?
Haweeneyda sheekadan khuseyso ayaa ku billowday sida:
Maalmaha qaar waxaan qarka u istaagaa in aan ninkeyga guriga ka ceyriyo. Ma aqaanno intaan ka badan si aan ugu jiro nolosha noocaan ah. Odaygayga waligiis wuxuu ahaa nin ka caajisa shaqada guriga lehna balwadda ciyaaraha fidiyowga (video gaming).
Markii laga soo tago intaas, wuxuu ii ahaa qof aad u macaan oo aad ii jecel, marwalibana i taageera. Wuxuu ii ahaa ninka ugu wanaagsan dunida oo dhan maadaama uu mar waliba i dareensiin jiray inaan ahay qofta ugu qaalisan aduunka. Waxaanna hubay in uu noqon doono aabbe aad iyo aad u wanaagsan.
Intaynaan caruur isu dhalin, waxaan qaadannay fadhi iyo wada hadal dheer kaas oon kaga hadalnay masu’uuliyada aabbe nimo iyo waxa uu ku khasbanaan doono in uu joojiyo si uu u noqdo aabbe kasoo baxa mas’uuliyadiisa. Wuxuu ii sheegay inuu diyaar u yahay howshaas.
Labadii bil ee ugu horreysay kaddib markaan hooyo iyo aabbe noqonay, wuxuu ahaa aabbe aad ugu faraxsan howsha cusub, wuxuuna kasoo baxayay boqolkiiba 50% iyo kabadan howshii laga rabay intii aan kasoo kabsanayay umusha.
Laakiin hadda howshii dhan faraha ayuu ka qaaday, kaligay ayaana wax walba qabta. Runtii waan soo nacay.
Inkastoo uu sameeyo lacag ka badan inta aan aniga shaqeeyo, hadana aniga ayaa bixiya biilasha ugu badan reerka, oo ay ku jirto kirada guriga. Kharashka keliya uu bixiyo waa cuntada, sidaasoo ay tahayna, tallaajada mar waliba waa faaruq.
Bil walba wuxuu ka calaacalaa in uusan haysanin lacag, wuxuu ku kaftamaa inaysan caddaalad ahayn in bil walba aan soo iibsado waxyaalaha aan jecelahay ee gaarka ii ah.
Lacagtiisa xageey aadaa? Su’aashaas ilaa hada kama jawaabi karo, mana ila wadaago meesha uu ku bixiyo lacagtiisa maadaama uu lacag badan qaato. Waxaa kaloo sii dheer in uu bil kasta dhamaad keeda lacag iga deynsado, dabcan lacagtaasna waligeed la iima soo celiyo.
Waxaan shaki ku jirin in aan ahay waalidka ugu weyn ama ugu muhiimsan nolosha cunugeenna. Hadii aan cunuga aabihiisa uga tago, wuxuu illoobaa in uu quudiyo, ama in uu ka beddelo xafaayada, ama u cadayo ilkaha ama uu u labiso. Wuxuu kaloo iska inkiraa hadduu cunuga ooyayo.
Hadii aan dhoho cunuga wax yar ii qabo howl ayaan qabsanaayaaye, daqiiqado kadib waxaan arkaa cunugii oo isagoo ooynayo la igu soo daayay, markaan weydiiyana wuxuu ku jawaabaa cunuga haduusan i rabin maxaan ka qaban karaa?
Waxay ila tahay in uu si kas ah u wasakheeyo guriga. Mar walbo waxaan dhahaa cunugga haay si aan u hagaajiyo guriga, wuxuuna dhahaa marwalba ‘anigaa hagaajinaya’ laakiin waligiis kuma dhaqaaqayo howshaas.
Waxaa meel walba yaalla dharkiisa iyo sigisaantiisa, wuxuu meel aadan filanaynin uga tagaa alaabta uu wax ku cuno oo wasakhaysan. Wuxuu i daawadaa aniga oo guriga nadiifinaya isla markaas ayaa caano ka daataan ama wax kale dhulka uga dhacaan wuuna kasii socdaa.
Hadduu dhoho ‘waxaan hagaajinaayaa jikada’, waxaan arkaa iyada oo wali wasakhaysan. Haddaan dhoho sidaan wax looma nadiifiyo, wuxuu ku jawaabaa ‘intaan ka badan maxaa laga faaiidaayaa?’.
Subax walba waxaan soo kacaa guriga oo ka wasakh badan maalinkii tegay. Waxaan u baqaa caafimaadka maskaxdeyda. Waan u adkeysan la’ahay, waxaan rabaa inaan iska ooyo.
Waxaan mas’uul ka ahay qorsho walba oo muhiim noo ah. Sida balamaha dhakhtarka, adeegga dharka ilmaha, adeegyada guriga, adeegyada ciidaha iyo wixii la mid ah. Xitaa ma yaqaanno xafaayada aan cunugga u isticmaalno magaceeda.
Waa inaan xasuusiyaa wax walba oo xitaa nafsadiisa muhiim u ah, sida balamaha kulamada shaqadiisa, shaqooyinka leh waqti kama dambeys ah, hadii aan isaga ku daayo, wax walba oo muhiim u ah wuu illoobayaa.
MAALMAHA GAARKA AH AMA CIIDAHA
Maalmaha ciidaha iyo fasaxa ayaa ugu howl badan reerkeenna maadama ay ka duwan yihiin maalmaha kale oo loogu talo galay in la damaashaado.
Waxaan ahay qofka ugu shaqada badan guriga, waxaan qaabilsanahay adeegyada dhan nooc walba oo ay yihiin. Xitaa hadiyadaha reerkiisa aan ugu talo galno ayaan soo iibiyaa isagana wuxuu illoobaa inuu aniga iisoo iibiyo hadiyad.
Maalinta hooyada aduunka la xuso ayuu iga balan qaaday inuu dhammaan howsha guriga qaban doonno, cunugana hayn doono si aan u nasto oon u seexdo maalintaas.
Markii la gaaray maalinta xuska hooyada aduunka, wuxuu iga qaaday cunuga, wuxuuna i dhahay seexo aniga ayaa cunugana haynaya, gurigana hagaajinaya. Waan ku farxay, waana seexday. Wuxuu iga maqnaa hal saac keliya, wuxuu igu soo tuuray cunugii oo ooynaya.
Wuxuu yiri cunugan adiga keliyaa af-fahmaya ee qabso anigana waxaan rabaa inaan seexdo. Cunugii ayaan soo qaatay, waxaan usoo baxay gurigii oo wasakh meel aad lugta dhigto aadan heleynin.
Maalmaha qaar waxaan is dhahaa musqusha inta isku soo xirto iska ooy waayo waxaan ka qabto ayaan garan lahay.
Si kasto waan ula hadlay, waan u ooyay, waan canaantay laakiin isbeddel ma laha. Jawaabta uu mar walbo isiiyo waa “Waan ka xumanay, waxaan sameeynaayaa isbeddel” dabcan isbeddelkaas waligiis kuma uusan dhaqaaqin.
Previous article4 calaamadood oo lagu garto dadka beenta sheega
Next article3-da erey ee muranka ka dhex dhaliya qoyska (iska-ilaali)